Akhri Liiska: 10-ka Magaalo ee Ugu Halista Badan Afrika oo la shaaciyay.[Muqdisho maku jirtaa?] | Codkagalmudug isha Laga Helo Wararka Xaqiiqda
Akhri Liiska: 10-ka Magaalo ee Ugu Halista Badan Afrika oo la shaaciyay.[Muqdisho maku jirtaa?]
Hay’adda la talinta amniga dunida oo ku taalla dalka Maraykanka OSAC ayaa soo saartay dhowaan qiimeyn ay ku sameysay tobanka magaalo ee afrika ugu halista badan iyadoo ka eegeysa dhinaca fal-danbiyeedyada. Halkan waxaan ku soo bandhigaynaa 10-ka magaalo ee ugu halista badan, amni ahaan qaaradda Afrika waxayna kala yihiin:
1-Rustenburg, South Africa: waa magaalada ugu halista badan Afrika. Sanadkii ina dhaafay oo kaliya waxaa laga diiwaan-geliyey 11,117 fal-danbiyeedyo ah. 85.71 oo ka mid ah 100-kii danbi ayaa sidii la rabo loo fuliyaa. Dhaca noocyadiisa kala duwan iyo qalalaasooyinka siyaasadeed waa danbiyada si joogtada ah ugu dhaca magaaladan.
2-Pietermaritzburg, South Africa: Dhacdooyinka dilalka iyo dhaca ah waxay halkan ka joogaan meel sare. Saddexdii sano ee ugu danbeysey tirada fal-danbiyeedyadu waxay u kordheen si laba jibaaran.
3-Benghazi, Libya: Tan iyo dhicistii xukuumadda Qadaafi, Libiya waxay mijaha la gashay dhibaatooyin kala duwan. Amaankuna wuxuu gacmaha u galay maleeshiyo. Benghazi waxaa lagu xusuustaa in safaaradii Maraykanka lasoo weeraray sanadkii 2012–halkaas oo safiirkii Maraykanka iyo afar kale lagu dilay.
4-Johannesburg, South Africa: Waa magaalada ugu weyn dalka Koofur Afrika. Waxaa ku nool 4 malyuun oo qof oo Soomaali badan ay ka mid tahay. Tirada fal-danbiyeedyo ee ka dhacana mayara. Tirada kiisas badan ee ku lugta leh kufsiga awgeed, waxaa magaaladani lagu magacaabay caasimaddii Kufsiga.
5-Durban, South Africa: Waa magaalo xeebeed ku caan ah dalxiiska oo sanad kasta ay yimaadaan kumaan kun oo dalxiisayaal ah. Waxaa la yaab leh, heerka amni-daro ee badi magaalooyinka dalkan ka jira awgeed, way adag tahay in dalxiise kaligiis iska socdaalo ama uu ku socdo gaarigiisa.
6-Lagos, Nigeria: Tiro lagu sheego 21 malyuun oo qof ayaa ku nool magaaladan Lagos, waana magaalada ugu weyn dalka Nigeria. Heerka fal-danbiyeedyaduna aad bay u sarreeyaan. Tuugo hubeysan ayaa dhaca ku fuliya barriga iyo biyaha.
7-Cape Town, South Africa: Waa magaalo-xeebeed kale oo ay ku nool yihiin tira badan oo Soomaali ah halkaas oo heerarka fal-danbiyeedku ay kordheen.
8-Port Elizabeth, South Africa: Waa magaalo-xeebeed kale oo soo jiidata tira badan oo dalxiisayaal ah. Waa magaalo taariikh hida-dhaqameed leh kana mid ah magaalooyinkii uu maray badmareenkii reer Portugal ee Vasco de Gama.
9-Luanda, Angola: Waa caasimad. Heerka fal-danbiyeedyaduna aad bay u sarreysaa halkaasoo dhaca noocyadiisa kala duwan lagu arko kaasoo u badan meelaha ay ku badan yihiin dadka shisheeyaha ah. Waana mid aad loogu baqo dalxiisayaasha. Waxaana lagula taliyaa inaysan lacago kala bixin meelaha ATM-yada ah ee jidadka ku ag-yaalla.
10-Nairobi, Kenya: Waa isha dhaqaale ee dalka Kenya. Halkaasoo sidoo kale tira badan oo Soomaali ah ay ku ganacsadaan. Waxay soo jiidataa indhaha shisheeyaha iyo maal-gashadayaasha, hase yeeshee waxay u nugushahay fal-danbiyeedyada.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo caalamka looga arko inay ka mid tahay magaalooyinka ugu halis badan adduunka ayaan lagu soo darin warbixintan maadaama aanay qayb ka ahayn tirokoobka cilmi baadhistan amni ee lagu sameeyey dalalka kale.